အလှတရားတို့ မြစ်ဖျားခံရာ မေမေ မေသူရဲ့ ငယ်စဉ်ဘဝက ရှားပါးပုံရိပ်လေးများ - Thu Ta Myay
အလှတရားတို့ မြစ်ဖျားခံရာ မေမေ မေသူရဲ့ ငယ်စဉ်ဘဝက ရှားပါးပုံရိပ်လေးများ
မင်းသားလွင်မိုးနဲ့ ဇနီးမေသူတို့ရဲ့သမီးနှစ်ယောက်ထဲက သမီးကြီးဖြစ်သူယွန်းဝတီလွင်မိုးကိုတော့ ပရိသတ်တွေ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်..။ သူမရဲ့ လှပတဲ့အလှတရားတွေကြောင့် ပုရိသတွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေးခြင်းကို ခံနေရတဲ့သူလို့ ဆိုရမှားမယ်မထင်ပါဘူးနော်..။ သူမလေးက အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုသွားရလို့ ပရိသတ်တွေ နှမြောတသဖြစ်ခဲ့ရတာပါ..။အခုဆိုရင် သူမလေးကတော့ ချစ်ခင်ပွန်းနဲ့အတူ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားသားလေး Liam နဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို လျှောက်လှမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်
သားဖြစ်သူ Liam လေးကလည်း ဖွေးဖွေးသန့်သန့်လေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းလို့ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်လေးဖြစ်နေပါပြီနော်..။ယွန်းဝတီလွင်မိုးတို့ မျိုးရိုးကတော့ မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ ကြည့်ကောင်းပြီးလှတဲ့သူတွေလို့ ဆိုရမှာပါ..အခုခါမှာတော့ အလှတရားတို့ရဲ့ မြစ်ဖျားခံရာ မေမေလည်းဖြစ် ၊]
ဖွားဖွားလည်း ဖြစ်တဲ့မေသူ ရဲ့ရှားရှားပါးပါး ပုံရိပ်တချို့ကို ပြသပေးချင်ပါတယ်နော် ပရိသတ်ကြီးရေ..။ ယွန်းဝတီလွင်မိုးကတော့ မေမေ မေသူရဲ့လှပခြင်းတွေကို ဆက်ခံထားရတဲ့သူလို့ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်နော်..။ မေမေဖြစ်သူရဲ့ ငယ်ငယ်ကပုံလေးတွေနဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုးလေးရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် သိနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်..။ သမီးဖြစ်သူက ယခုအချိန်မှာ မော်ဒယ်အနေနဲ့ နာမည်ကြီးနေသလို မေမေဖြစ်သူ မေသူကလည်းတစ်ခေတ်တစ်ခါက သတင်းကြေငြာသူအဖြစ် နာမည်ကြီးခဲ့သူပါပဲနော်
မေမေ မေသူကတော့ ဟိုးငယ်စဉ်ကလေးဘဝတည်းက လှသူဖြစ်သလို အသက်တွေကြီးလာတာတောင် ကျက်သရေရှိရှိလှနေဆဲပါပဲနော်..။ ပုံလေးတွေထဲမှာ ဖွားဖွားမေသူက သိပ်ကို လှပလွန်းနေတာကို တွေ့ရမှာပါ..။ ပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီးရင် သမီးယွန်းဝတီလွင်မိုးလေးက မေမေ့ရဲ့အလှတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ဆက်ခံထားရတယ်လို့ ပြောရင်မှားမယ်မထင်တော့ပါဘူးနော် ပရိသတ်ကြီးရေ. ပရိသတ်ကြီးရော မေမေ မေသူနဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုးတို့က သ်ိပ်ကိုတူလွန်းတယ်လို မထင်ဘူးလား..။ ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး မှတ်ချက်လေးတွေပေးသွားပါဦးနော်.
မငျးသားလှငျမိုးနဲ့ ဇနီးမသေူတို့ရဲ့သမီးနှဈယောကျထဲက သမီးကွီးဖွဈသူယှနျးဝတီလှငျမိုးကိုတော့ ပရိသတျတှေ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမှာပါနျော..။ သူမရဲ့ လှပတဲ့အလှတရားတှကွေောငျ့ ပုရိသတှရေဲ့ ဝနျးရံအားပေးခွငျးကို ခံနရေတဲ့သူလို့ ဆိုရမှားမယျမထငျပါဘူးနျော..။ သူမလေးက အသကျငယျငယျလေးနဲ့ အိမျထောငျပွုသှားရလို့ ပရိသတျတှေ နှမွောတသဖွဈခဲ့ရတာပါ..။အခုဆိုရငျ သူမလေးကတော့ ခဈြခငျပှနျးနဲ့အတူ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သားသားလေး Liam နဲ့ ပြျောရှငျတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို လြှောကျလှမျးနပွေီဖွဈပါတယျ
သားဖွဈသူ Liam လေးကလညျး ဖှေးဖှေးသနျ့သနျ့လေးနဲ့ ခဈြစရာကောငျးလှနျးလို့ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျောလေးဖွဈနပေါပွီနျော..။ယှနျးဝတီလှငျမိုးတို့ မြိုးရိုးကတော့ မြိုးနဲ့ရိုးနဲ့ ကွညျ့ကောငျးပွီးလှတဲ့သူတှလေို့ ဆိုရမှာပါ..အခုခါမှာတော့ အလှတရားတို့ရဲ့ မွဈဖြားခံရာ မမေလေညျးဖွဈ ၊]
ဖှားဖှားလညျး ဖွဈတဲ့မသေူ ရဲ့ရှားရှားပါးပါး ပုံရိပျတခြို့ကို ပွသပေးခငျြပါတယျနျော ပရိသတျကွီးရေ..။ ယှနျးဝတီလှငျမိုးကတော့ မမေေ မသေူရဲ့ လှပခွငျးတှကေို ဆကျခံထားရတဲ့သူလို့ပွောရမယျထငျပါတယျနျော..။ မမေဖွေဈသူရဲ့ ငယျငယျကပုံလေးတှနေဲ့ ယှနျးဝတီလှငျမိုးလေးရဲ့ ပုံရိပျလေးတှနေဲ့ ယှဉျကွညျ့ရငျ သိနိုငျမယျထငျပါတယျ..။ သမီးဖွဈသူက ယခုအခြိနျမှာ မျောဒယျအနနေဲ့ နာမညျကွီးနသေလို မမေဖွေဈသူ မသေူကလညျးတဈခတျေတဈခါက သတငျးကွငွောသူအဖွဈ နာမညျကွီးခဲ့သူပါပဲနျော
မမေေ မသေူကတော့ ဟိုးငယျစဉျကလေးဘဝတညျးက လှသူဖွဈသလို အသကျတှကွေီးလာတာတောငျ ကကျြသရရှေိရှိလှနဆေဲပါပဲနျော..။ ပုံလေးတှထေဲမှာ ဖှားဖှားမသေူက သိပျကို လှပလှနျးနတောကို တှရေ့မှာပါ..။ ပုံလေးတှကေို ကွညျ့ပွီးရငျ သမီးယှနျးဝတီလှငျမိုးလေးက မမေရေဲ့အလှတရားတှကေို ပိုငျဆိုငျဆကျခံထားရတယျလို့ ပွောရငျမှားမယျမထငျတော့ပါဘူးနျော ပရိသတျကွီးရေ. ပရိသတျကွီးရော မမေေ မသေူနဲ့ ယှနျးဝတီလှငျမိုးတို့က သိပျကိုတူလှနျးတယျလို မထငျဘူးလား..။ ပုံလေးတှကွေညျ့ပွီး မှတျခကျြလေးတှပေေးသှားပါဦးနျော.